DISTRIKAN’ANDAPA : Tafakatra 50 000 ariary ny iray kitapon’ny arina fandrehatra
Any amin’ny Distrikan’Andapa no lafo vidy indrindra amin’ny arina fandrehatra eto amintsika ankehitriny. Tafakatra 50 000 ariary ny iray kitapo any an-toerana ary dia maro ny mponina mikaikaika noho ny tsy fahafaha-mividy amin’izao fahasarotam-piainana mahazo ny vahoaka Malagasy izao. 16 octobre 2017
Voatery mividy amin’ny antsinjarany avokoa ny ankabetsahan’ireo mponina ao an-toerana ary 3 000 ariary ny iray siny. Eo anatrehan’izany dia sarotiny ny lehiben’ny ala any an-toerana amin’ny fikapahana hazo ary voatery manafatra arina fandrehatra avy ao amin’ny Distrikan’i Vohemar ireo mpangala ambongady any an-toerana.
Voaaro fatratra ny ala ao Andapa. Anisany mampidangana azy io ny fitaterana na dia izany aza tafahoatra ny tombony alain’ireo mpivarotra. Fantatra fa 300 km eo ho eo ny elanelan’ny Vohemar sy Andapa. Efa ho iray volana teo no nampidangana ny vidin’ny arina fandrehatra ao Andapa. Marihina fa lafo fiainana tokoa ny faritra Sava. Voalaza fa noho ny fisian’ny vokatra lavanila no tena mahatonga izany ary voatery manararaotra avokoa ny ankamaroan’ireo mpivarotra rehetra.
Anisany tena mampidangana ny vidim-piainana any an-toerana ihany koa ny faharatsian’ny lalana itondrana ny vokatra. Mbola ao anatin’ny fotoam-piotazana lavanila ihany koa ny Faritra ankehitriny ka manararaotra ireo mpivarotra.
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1831) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (47) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021